aha njirimara njikwa | otu esi eme ka aha ntanetị
December 22, 2016 by Corey Weeks
Richard Roberts Gwara ụmụ akwụkwọ n’oge ya kwa izu uka, “Nke a ikpe … bụ banyere iyi egwu, imebi aha na ịpụnara mmadụ.” Kpụrụ ọrụ Prọfesọ na ikpe gbara akwụkwọ Tim Brooker kwuru, “All n’elu na campus e nwere ihe ịrịba ama ahụ, sị, ‘Chineke we si, gēwurum a mahadum, na-ewu ya na ikike ya, na-ewu ya na Mmụọ Nsọ.’ O bu ihe nwute, nweghi ihe ozo. ”
Afọ atọ, akụnụba ahụ ahụla Simeji ọrụ Igbo-guzo njem-labelụ ndụmọdụ. Anyị Bata 90 pasent osikapa karịa anyị mere Afọ atọ azụ. Bank World Bank agbaala Nigeria dịka Otu n’ime awa kachasị Woman kachasị Woman n’ụwa. Emọz mgbe-ugbu niile ọma, azụlite ọgbọ saịtị nha niile 2,600 megawatts Cha Cha 7.500 agụ owuru.
Michael Cardone, Sr. Ụlọ Nzukọ (nke a na-akpọ Edward Hughes Hall) bụ ebe obibi ezumike abụọ nye Frances na ụlọ ruru 372 mmadụ. A na – ejikọta ya na ụlọ ndị ọzọ dị atọ nke ụlọ elu site n’ọnụ ụlọ etiti ụlọ etiti, nke a na – akpọ “Fishbowl” maka mgbidi mpụga ya.